Fandaharan’asan’ny Trano fampiantranoana vonjimaika (CHT) | Grandir à Antsirabe
Fandaharan’asan’ny Trano fampiantranoana vonjimaika (CHT)
IREO FANDAHARAN’ASAN’NY TRANO FAMPIANTRANOANA VONJIMAIKA (CHT)
Isan’andro, ny Alatsinainy ka hatramin’ny Sabotsy, ny trano fampiantranoana vonjimaika na ny CHT dia nametraka fandaharan’asa izay sady fampianarana no fampivoarana ny kolon-tsaina ho an’ny ankizy tonga ao amin’ny trano fampiantranoana. Ireo ankizy izay mandalo dia tsy tonga hisakafo sy hatory fotsiny ihany fa koa tonga mba hianatra ary koa ahafahany miaina ireo filana fototra. Ny hetsika iray dia maharitra eo amin’ny ora iray sy sasany eo ho eo ary manomboka amin’ny 6ora sy sasany hariva rehefa tafahomana ireo ankizy (Mandro, manasa lamba kely, manampy mahandro sakafo). Ity aroso manaraka ity ary ny momban’ny fandaharan’asa :
- Alatsinainy : fanasana faobe, hetsika malalaka
Ireo ankizy dia mandray anjara amin’ny fanasana faobe mba ahafahan’izy ireo mampivoatra ny fandraisany andraikitra. Ny hetsika malalaka dia natao hampivelarana azy ireo amin’ny fanapahan-kevitra.
- Talata : fianarana fototra, famakiam-boky ary angano
Ireo ankizin’ny lalana ireo dia tsy manana fianarana ary tsy mandeha an-tsekoly, izany no nahatonga ny fikambanana nametraka ny asa fampianarana mba ahafahan’izy ireo mahazo ireo fampianarana fototra amin’ny fanoratana, ny famakian-teny ary ny kajy ; ary koa ho fanamifasana ho an’ireo izay efa nadalo sekoly.
- Alarobia : famoronana, asa-tanana, dihy
Ny famoronana dia manampy ireo ankizy hampivoatra ny fieritreretany.
Ny dihy izay atao isaky ny Alarobia faran’ny volana dia manampy azy ireo amin’ny fanehoana ny fihetseham-po anaty sady koa ho fampiasana vatana.
. Ny asa tanana dia manampy betsaka amin’ny fifantohana, ny faharetana ary ny fahazotoana.
- Alakamisy : sary, fandokoana, lalao isam-bondrona, fifampiresahana
Ireo hetsika ireo dia ahafahana mampivelatra ny sain’ny ankizy, mahatonga azy hahay hiara-hiasa, hahay hifanaja eo amin’ny fifanankalozan-kevitra mba hananan’ny ankizy toetra mendrika. Ny fifampiresahana dia atao isaky ny Alakamisy faran’ny volana.
- Zoma: informatika, fizarana ekipa
Tsy maintsy manaraka ny toe-java-misy indrindra eo amin’ny fivoaran’ny solosaina ny tsirairay. Ny fanombohana mianatra ny momban’ny solosaina dia ahafahan’izy ireo mampivaletra ny fahalalany ao aoriana.
Ny fizarana ekipa na vondrona no mitaiza azy ami’ny fifanankalozana, ny fihainoana ary koa ny fandraisam-pitenenana.
- Sabotsy : sary miaina, TV, fanatanjahantena
Sady fotoam-pialamboly no fampitana hafatra fanabeazana, fotoana ihany koa hianarana ny teny frantsay.
Ny fanatanjahantena dia sady natao hataizana vatana no ahafan’ny ankizy ihany koa maneho ny fihetsem-po ao anaty.
Ankoatra ireo dia misy ny hetsika mifameno amin’io fandaharan’asa io, ohatra ny mozika mandritry ny volana Jolay mba hamantarana ny talentan’ireo ankizy , mampivelatra ny lamina sy ny gadona, fa ihany koa mampiala-voly.
Ny fahasalaman’ireo ankizy moa dia voahara-mason’ny mpitsabo avy ao amin’ny fikambanana Aromathérapie Sans Frontières izay mitsidika indroa isan-kerinandro ny trano fampiantranoana vonjimaika.